Gudoomiye Tarsan: Xeebta Liido Waxaa lagu Sameeyaa Anshax Xumo | IshaBay Dhaba
Gudoomiye Tarsan: Xeebta Liido Waxaa lagu Sameeyaa Anshax Xumo
Guddoomiyaha gobollka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Max’uud Axmed Nuur Tarsan ayaa sheegay in dhalinta ka timid wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka dhaqan xumo ku soo kordhiyeen xeebta Liido oo Jimco walba ku kulmaan dad ka kooban qeybaha bulshada.
Guddoomiyaha gobollka Banaadir ayaa sheegay in looga baahan yahay dhalinta qurbaha ka timid in ay ogaadaan in halka ay joogaan uu yahay dal Muslim ah oo leh ashax iyo diinta laga shidaal qaato.
‘’Waxaan leenahay dhalinyarrada qurbaha ka timid ee xeebta Liido u dabaal dagta, halkan ma’aha dalalkii reer galbeedka ee wixii la doono laga sameyn jiray, waxaa jirta diin iyo anshax aynu leenahay, ma aqbali doono in dhaqan xumo aad dalka ku soo kordhisaan ayuu yiri,’’ guddoomiyaha gobollka Banaadir.
Waxaa uu amar ku siiyay Tarsan ciidamada nabad-galyada in mudo 24 saac ay xiraan gabadhii ay arkaan iyadoo qeyb jirkeeda ka mid ah soo qaawisay, sidoo kalana dhalinyarrada ay gabdhaha ku dhawaan karin ama qabsan karin.
“Ma aqbaleyno gabar barideeda qaawan tahay naasaheedana qaawaan tahay waa la xirayaa, anshaxa ayaa ka soo horjeestiin, wiilasha kuma dhegi karaan, askarta amar ayay qabtaa 24-saac ay xirto”ayuu yiri Tarsan.
Xeebta Liido ee degmada C/siis ayaa tan iyo markii magaalada Muqdisho laga saaray Al-shabaab waxaa ay aheyd meel ay u soo damaashaad tagaan dadka reer Muqdisho maalinta ugu danbeysa todobaadka, waxaana bilihii ugu danbeeyay siweyn ugu soo badanayay dadka ka yimid qurbaha haba ugu badnadaan dhalinyarrada.
Hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha gobollka Banaadir ayaa la oran karaan waa kii ugu horeeyay ee loogu digayo dhalinyarrada u damaashaad tagta xeebta Liido oo la leeyahay waayadii ugu danbeysay waxaa ay la soo baxeen dhaqamo aan diinta iyo anshaxa suuban midna ku habooneyn.